Milamina ny fitsangatsanganana any Brunei: tsy tokony hotoraham-bato ho an'ny mpitsidika pelaka ny lesbiana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Milamina ny fitsangatsanganana any Brunei: tsy tokony hotoraham-bato ho an'ny mpitsidika pelaka ny lesbiana
Ny fitondrana Trump dia nandà ny hamoaka mpanolotsaina momba ny dia momba an'i Brunei, na dia manitsakitsaka ny zon'olombelona iraisam-pirenena aza ny firenena taorian'ny nanambaran'ny Sultan Hassanal Bolkiah avy any Brunei fa tsy hitora-bato olona ny fanamelohana azy noho ny fanitsakitsaham-bady na firaisana ara-nofo. Brunei dia mijanona ho firenena azo antoka kokoa noho i Alemana, Bahamas na Torkia handehanana amin'ny fomba ofisialy amerikana.
Araka ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona, ​​ny sazy amin'ny kaporaly amin'ny endriny rehetra - toa ny fitoraham-bato, fanapahana na fikapohana - dia fampijaliana na sazy henjana, tsy maha-olombelona na manambany, izay voarara amin'ny toe-javatra rehetra.
Na izany aza, ny lalàna momba ny famonoana olona ho an'ny pelaka ho an'ny lahy sy ny vavy dia mijanona ao amin'ny boky. Ny vaovao tsara dia, tsy hampiharina avy hatrany. Tsy nisy na inona na inona momba ny fepetra baribariana hafa natolotray, toy ny kapoka misy karavasy ho an'ny firaisana ara-nofo. Satria ny lalàna dia eo amin'ny boky, dia azo ampiharina amin'ny fotoana fohy. Ny vaovao ratsy dia ny fotoanan'ny fonja dia mijanona ho azo antoka sahady amin'ny fanaovana firaisana toy izany.
Ireo olo-malaza iraisam-pirenena toa an'i George Cooney sy Elton John dia niantso ny hanaovana ankivy ny tanànan'i Brunei, ao anatin'izany ny hotely any Etazonia sy UK. Orinasa maro an'arivony maro no nandrara ny mpiasa mampiasa hotely sultan ary ny orinasam-pizahan-tany sasany dia nanakana ny fampiroboroboana an'i Brunei ho toerana fizahan-tany. LGBT Hawaii ary fikambanana amerikana maro hafa no nangataka tamin'ny Departemantam-panjakana amerikana hampiakatra ny torohevitra momba ny dia hatrany amin'ny ambaratonga 1 (azo antoka) ankehitriny, izay tsy voavaly sy noraisin'ny manampahefana amerikana.
Ny federasiona polisy, izay misolo tena ny manamboninahitra maherin'ny 119,000 any Angletera sy Wales hatramin'ny laharan'ny lohan'ny inspektera, dia nanome ny fanohanany ihany koa tamin'ny alàlan'ny famindrana ireo mari-pankasitrahana isan-taona manalavitra ny hotely Dorchester.
“Fantatro fa be ny fanontaniana sy ny fiheveran-diso momba ny fampiharana ny SPCO. Na izany aza, mino izahay fa rehefa voadio ireo dia hiseho ny fahamendrehan'ny lalàna, "hoy ny sultan nandritra ny kabary nialohan'ny nanombohan'ny volana masina Islamika tamin'ny Ramadany.
"Araka ny hita nandritra ny roapolo taona mahery, dia nampihatra moratorium de facto amin'ny fanatanterahana ny fanamelohana ho faty ho an'ireo tranga ambanin'ny lalàna iraisana. Ho ampiharina amin'ny tranga ao ambanin'ny SPCO, izay manome sehatra malalaka kokoa hahazoana famelana. "
Ilay sultan manankarena, izay kapitenin'ny fiaramanidina jumbo Boeing 747 azy manokana izay nanidina tany Washington DC ary nihaona tamin'ny filoha amerikana teo aloha Barack Obama, dia matetika no iharan'ny tsikera avy amin'ireo mpikatroka izay mihevitra ny fanapahany ho mpanjaka tsy refesi-mandidy. Matetika izy tsy mandray ny tsikera toy izany.
“Na ny lalàna iraisana na ny Syariah mikendry ny hisian'ny fandriampahalemana sy ny firindran'ny firenena ny lalàna, ”hoy izy. "Manan-danja ihany koa izy ireo amin'ny fiarovana ny fitondran-tena sy ny fahalalam-pomba ao amin'ny firenena ary koa ny fiainam-bahoaka."
Brunei dia nanao sonia nefa tsy mbola nanamarina ny Fifanarahana UN manohitra ny fampijaliana sy ny fampijaliana mahery setra, fanararaotana na fanasaziana na fanasaziana ary nandà ny tolo-kevitra rehetra momba izany tamin'ny fandinihana ny firaketana ny zon'olombelona ao amin'ny ONU tamin'ny 2014, hoy ny Amnesty International.
Ny mpandraharaha Superjet 100 lehibe faharoa an'ny Rosia dia nandatsaka ny fiaramanidina, manafoana ny fividianana vaovao